အချစ်ပန်းပွင့် – Grab Love Story
ကျွန်တော့်မျက်နှာတခုလုံး ရေနွေးပူနဲ့ အပက်ခံလိုက်ရသလို ထူပူသွားပါသည်။သွားပြီ…သွားပြီ၊ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိတော့တာနဲ့ ခေါင်းကြီးကိုသာ ငုံ့ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဘေးနားက ကုလားမြင့်အောင် ကလွဲပြီး အတန်းထဲကလူတွေ ဘယ်သူမှတော့ သိလိုက်ပုံမပေါ်ဘူး။ အားလုံးက ထမင်းစားချိန်ဆိုတော့ သာသူရှုပ်နေကြတာလေ။ ကျွန်တော်နဲ့ မြင့်အောင်သာ ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန် အမှီပြန်ပေးရမှာမို့ ဒီစာအုပ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ကုန်းဖတ်နေကြတာ။ ဘာ စာအုပ်ရမှာလဲဗျ… ..ကျွန်တော်တို့လို သွေးကြွခါစကောင်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မြန်မာအောစာအုပ်ပေါ့။ အခုမှ စဖတ်လို့ သုံးလေးမျက်နှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ဖျတ်ခနဲ လက်ထဲက ဆွဲလုခံလိုက်ရလို့ဘယ်ကောင်လဲဟ ဆိုပြီး ကောမလို့ မော့ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၉တန်း ( D )အတန်းပိုင်ဆိုလဲဟုတ် ၊ကျူရှင်ဆရာမဆိုလဲ ဟုတ်တဲ့ဆရာမ ဒေါ်မမလေး ဖြစ်နေတယ်။ သေပြီပေါ့ဗျာ…ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင် ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။လက်ထဲက ခိုးဖတ်နေတဲ့ အောစာအုပ်ကို ဆရာမ မိသွားပြီဆိုတဲ့ အသိက တက်ခါစဖီလင်လေးတွေတောင် ပျောက်ကုန်တယ်။တော်သေးတယ်ဗျာ…ဆရာမက စာအုပ်ကို သိမ်းပြီးဘာမှ မပြောပဲထွက်သွားလို့။ ဒါပေမယ့် တချိန်လုံး စိတ်ထဲမှာ ဒီစာအုပ်ကိစ္စကို ဆရာမဘယ်လို အရေးယူအပြစ်ပေးမလဲဆိုတာကိုပဲ တွေးပူနေမိတော့ တာပါပဲ။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ ညနေပိုင်း နံပါတ်-၆ စာသင်ချိန်ဟာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အချိန်တွေကို အားရဝမ်းသာစောင့်နေလေ့ရှိပါတယ်။စာအသင်ကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. အခုမှ နှာသွေးကြွစ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဆရာမရဲ့ အပြကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ အတန်းထဲဘက်ကို ကျော ပေးပြီး စာရေးနေပြီဆိုရင် တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ တင်သားကြီး နှစ်ဘက်ကို အားရပါးရ ကြည့်ရလို့လေ။ အတန်းထဲက အပျိူဖြစ်ခါစ ကောင်မတွေရဲ့ ဖင်တွေနဲ့ တခြားစီပေါ့ဗျာ။ ဒီကောင်မတွေက ဒါတောင်ပဲကပေးချင်သေးတယ်။ သူတို့ဖင်နံပြားတွေနဲ့များ….ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြရင်တောင် လီးတောင်ပါ့မလား မသိဘူး။ ဆရာမ ရဲ့ဂျောကြီးကတော့ရှယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြည့်ကားတင်းထွား အသည်းယားစရာကြီးပေါ့။ အခုတော့အဲဒီတင်ကားကားကြီးကိုခိုးတောင်မကြည့်ရဲ လောက်အောင်စိတ်တွေမလုံမလဲ ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီကြားထဲ ကုလားမြင့်အောင်က လေသံတိုးတိုးနဲ့၊ “ ဟေ့ကောင် မောင်နိုင်၊ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …ဆရာမက ဘာမှလဲ မပြောသေးဘူးကွ။ ” “ အေး ငါလဲ အဲဒါပဲတွေးနေတာကွ…စောက်ပြဿနာပဲ။ ” “ ငါက အရေးမကြီးသေးဘူး မောင်နိုင်….မင်းကညနေ ကျူရှင်ရှိတယ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ” “ သိဘူးကွာ ညစ်တယ်။ ” “ဟိုနှစ်ကောင် ဘာမရှင်းလို့လဲ….ဆရာမကိုမေးလေ။ ” “အာ ဟို ရှင်းပါတယ် ရှင်းပါတယ် ဆရာမ။ ” ကျွန်တော်တို့ နှစ်ကောင် ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က စာတွေကိုသာ အသိလက်လွတ် ကူးရေးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ ဆရာမကစာသင်ချိန် ပြီးတော့အခန်းထဲက မထွက်ခင်ကျွန်တော့်ကို လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ ဆရာမ အနားရောက်သွားတော့မှ ဆရာမက ခပ်တိုးတိုးနဲ့၊ “ မောင်နိုင်….ညနေကျရင် ဆရာမကိုစောင့်ပါ။အမှတ်ခြစ်စရာတွေ အိမ်ကိုပြန်သယ်ရမှာ နဲနဲလေးနေလို့။ ” “ သြော်…ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ။ ” “ အေးအေး စိတ်တွေနော် စိတ်တွေ….ဟင်းဟင်း။ ” ဟူး …. လေပူတွေ မှုတ်ပြီး သက်ပြင်းချ လိုက်ရပါသည်။ ဆရာကြီး ရုံးခန်းလိုက်ခဲ့လို့များ ပြောပြီလား ဆိုပြီးလန့်သွားတာပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ ….ကျောင်းဆင်းရင် ဆရာမအိမ်ကို ကျူရှင်လိုက်သင်ရတာလေ။ ခါတိုင်းလိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အရင်မပြန်နှင့်ပဲ ဆရာမကို စောင့်ပြီး စာအုပ်တွေ ကူသယ်ပေးဖို့ ပဲပြောတာ။
အင်း အခြေအနေကတော့ ထင်သလောက် မဆိုးနိုင်ဘူး ထင်ရတာပဲ။ညနေကျောင်းဆင်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူမလိုက်သွားတော့ပဲ ကျောင်းရှေ့အုတ်ခုံမှာထိုင်ပြီး ဆရာမကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ လက်ဆွဲခြင်းတဖက် အမှတ်ခြစ်စရာစာအုပ်တွေထည့်ထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တဖက်နဲ့ ဆရာမထွက်လာပါတယ်။ ကမန်းကတန်း အဲဒီကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြီးကို ပြေးဆွဲလိုက်တာပေါ့….ကိုယ်က အပြစ်ရှိသူမဟုတ်လား “ ပေး ပေး ဆရာမ…ကျွန်တော်ဒါကြီးသယ်ခဲ့မယ်။ ” “ အေးအေး…မောင်နိုင် နဲနဲတော့လေးတယ်နော်။လာလာ နောက်ကျနေမယ်…သွားရအောင်။ ” ပြောရင်းနဲ့ ရှေကအရင်ထွက်သွားတဲ့ ဆရာမနောက်ကို စာအုပ်ထုပ်ကြီးဆွဲပြီး အပြေးလိုက်ရပါတယ်။ရှေ့နောက်၂ပေလောက်ပဲကွာပြီး လျှောက်နေတာမို့ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ စည်းချက်ညီညီ လိုက်ပြီးခါရမ်းနေတဲ့ တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးကို မစားရဝခမန်း ကြည့်နေရပါတယ်။ကျောင်းစိမ်းထမီအောက်က ကော့ပြန်တက်နေတဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးနိမ်းတုံမြင့်တုံ တုန်ခါနေတာကိုကြည့်ရင်း စိတ်ကူးနဲ့ အကိုင်ခံရတိုင်းသာ ပဲ့ပဲ့သွားမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ဆို ဆရာမမှာ ထိုင်ဖို့တောင်တင်ပါးရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို နှာထစ ကောင်တွေ ဂွင်းလေးများ စိမ်ပြေနပြေတိုက်တတ်လာပြီဆိုရင်…အတွေးထဲမှာ ကိုယ်ဘာသာဇာတ်လမ်းလေးတွေ တွေးယူပြီး ဂွင်းထုကြတာ မဟုတ်လား။ဖာလဲသွားမချရဲ..အောကားကလဲ ဆန္ဒရှိတိုင်း ကြည့်ဖို့ကမလွယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်မျက်စိထဲစွဲနေတဲ့ စော်ကို အာရုံထဲမှာ ခေါ်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့လိုးတတ်ကြတာလေ။ကျွန်တော်တို့ အရွယ်အများစုကတော့ ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာ နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ နေရတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေထဲကမှ ကိုယ်သဘောကျရာ မိန်းမတယောက်ယောက်ကို မှန်းပြီးဂွင်းထုအာသာဖြေလေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်လဲ ညတိုင်း ဆရာမကို စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ဂွင်းထုနေကြမို့ပါ။ဆရာမက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂွင်းမော်ဒယ် ပေါ့ဗျာ။ “ ဟိုကောင်လေး…ဘာတွေတွေးနေတာလဲ။ဟိုမှာ ကားလာပြီ…မြန်မြန်။ ” “အာ ဟုတ်ဟုတ်။ ” တွေးရင်းနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တာ ကားမှတ်တိုင်ကို ဘယ်လိုရောက်နေမှန်းတောင် မသိဘူး။ဘာတွေတွေးနေတာလဲတဲ့…ဆရာမက။ ဝေါကနဲ ထိုးရပ်လိုက်တဲ့ ဟိုင်းလပ်ကားနောက်ခန်းကို ဆရာမနဲ့ ကျွန်တော် အပြေးကလေးတက်လိုက်ပါတယ်။
လူတောင်နေရာမရသေး ခင် ကားကအုန်းကနဲဆောင့်ထွက်လိုက်တော့မှ စောက်ကျိုးနဲ အနေအထားနဲ့ ဆရာမနဲ့ ကျွန်တော် ဒီကားပေါ်ပါလာတာသိလိုက်ရပါတယ်။ ထိုင်ခုံနေရာလွတ် မရှိတော့တဲ့ ဟိုင်းလပ်ကားရဲ့ ခြေနင်းခုံပေါ်မှာ ဆရာမကခြေတဘက်ထောက်ပြီး အမိုးကိုင်းက လက်တန်းကို ကိုင်ကာ ကုန်းကုန်းကွကွ ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီကုန်းကုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ အနောက်တည့်တည့်မှာ လက်တဘက်ကငြိမ်ငြိမ်လေး ရပ်နေရတာဆို အကြောင်း မဟုတ်ဘူးလေ။ခုဟာက သူ့ထက်ငါ အလုအယက်မောင်းနေတဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာ မဟုတ်လား။ ကားစထွက်လိုက်ပြီ ဆိုရင်ပဲ အကြောင်းကပေါ်လာပြီလေ။ အရှိန်လေးနဲ့ဝေါကနဲ အထွက်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးကနောက်ကို တချက်ယိုင်သွားပြီး မရှေ့ကိုအုန်း ကနဲပြေးဆောင့်တော့တာပဲ။ ရှေ့မှာရှိနေတာက အုတ်နံရံကြီးဆိုလဲ အကြောင်းမရှိသေးဘူး။ မသကာ နဲနဲပါးပါး နာယုံပဲ။ ခုဟာက ရှေ့မှာရှိနေတာက ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြီးလေ… အဲဒီဖင်ကားကားကြီးကိုပြေးဆောင့်မိမှတော့ အကြောင်းရှိပြီပေါ့။ ဘာမှ လုပ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်လဲ ဘာမှမလုပ်ပဲ နေနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ပုဆိုးထဲကအကောင်ကတော့ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး။ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ ချက်ချင်းပဲ ရုန်းကန်ကြီးထွား လာပါတယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီး အခြေအနေမဆိုးလာအောင်သတိထားပြီးနေပေမယ့် မောင်းချင်သလို မောင်းနေတဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာ ကျွန်တော်လီးက ရှေ့က ကုန်းနေတဲ့ ဆရာမဖင်ကားကားကြီးကို ပြေးဆောင့်လိုက်၊ဆရာမဖင်ကြီးက ကျွန်တော့်လီးဆီပြေးဝင်လာလိုက်နဲ့ လီးနဲ့ဖင် စိန်ပြေးတမ်းကစားနေရပါတယ်။ ကားပေါ်ကလူတွေကလဲ ဂိတ်ဆုံးထိများစီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြလားမသိဘူး တယောက်မှ တုတ်တုတ်မလှုပ်ဘူး။ တယောက်ယောက် ဆင်းသွားလို့ ဆရာမထိုင်ဖို့နေရာ ရသွားရင် ဒီအနေအထားက လွတ်လမ်းမြင်သေးတယ်။ ခုတော့ အဲဒီဖင်ကြီးကို မတော်တဆဆောင့်မိနေရာကနေ အရသာတွေ့ပြီး တမင်တကာကို ပြေးပြေးဆောင့်ချင်နေမိပါပြီ။ လူပျိုဖြစ်ပြီးနှာသာထလာခဲ့တာ…မိန်းမတွေနဲ့ပိတ်သီးပွတ်သပ်နေခဲ့ဘူးတာမှမဟုတ်တာ။ ခုလို အရှင်လတ်လတ်ကြီး တောင်နေတဲ့လီးနဲ့ ဆရာမဖင်ကြီးကို မထိတထိဆောင့်နေရတဲ့ အရသာဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မဟာစည်းစိမ်ပါပဲ။ ဖင်သားကြီးတွေကလဲ အိနေတာပဲ။တခါတခါ ပြေးကပ်နေရာကနေ ချက်ချင်းပြန်မကွာသေးပဲ အသားချင်းပွတ်ပြီးဖိဆွဲသလို ဖြစ်ပြီးမှ ပြန်ကွာသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲ ဗုံးအလုံးတစ်ရာလောက် စုပြုံပေါက်ကွဲသွားသလား ထင်ရအောင်ကို တုန်ခါကျန်နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလောက်တင်းမာနေတဲ့ လီးတံမှာတောင် ဆရာမဖင်ကြီးတွေရဲ့ နူးညံ့မှုကို ခံစားနေရရင် ဆရာမကရော သူ့ဖင်ကိုလာလာဆောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးရဲ့ မာကျောတောင့်တင်းနေမှုကို သိများနေမလား။
ဒါပေမယ့် ဆရာမက ပုံစံမပျက်ဖင်ကုန်းထားလျက်ပဲ ငြိမ်နေတာမို့ ကျွန်တော်လဲ တချက်တချက် မသိမသာ ဆောင့်လိုက် တခါတခါ သိသိသာသာဆောင့်လိုက် လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကားစပယ်ယာ ခမျာလဲ တစ်စီးလုံးဖင်သေတွေချည်းပဲပါလာလို့ စိတ်ညစ်နေပုံရပါတယ်။မြေနီကုန်းမှာမီးပွိုင့်မိနေတုန်း ရှေ့မှတ်တိုင်တွေ အကုန်မေးနေပါတယ်။ ဆွဲထားရတဲ့စာအုပ်ထုပ်ကြီးကြောင့်လက်အံသေနေတာကိုတောင် အခုမှသိတယ်..တကယ်တကယ် အာရုံကအဲဒီဖင်ကြီး ပေါ်မှာပဲရှိနေတာ။စာအုပ်ကိုလက်ပြောင်းပြီးဆွဲလိုက်တုန်း စပယ်ယာကမှတ်တိုင်အမေးမှာ “ သုခ ပါလား …….. သုခ ။ ” “ ပါတယ် သုခ။ ” ဆိုပြီး ဒေါ်မမလေးဖြေလိုက်သံကြားရပါတယ်။ကောင်းရောဗျာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ ဆင်းမယ့်လူကိုမရှိဘူး။မီးပွိုင့်စိမ်းသွားတော့ ကားကဒေါနဲ့ မောနဲ့ဆောင့်အထွက်မှာ ပြည့်ကားတင်းထွားလှတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးကို အားပါးတရ ဖိဆောင့်ချလိုက်မိပါတယ်။ခါးကိုကော့ပြီး ပိုပိုသာသာ လေးဆောင့်ထည့်လိုက်တာမို့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးတောင် ဆတ်ခနဲ ကားထဲကို ပြေးဝင်သွားပါတယ်။လုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်လိုက်ပြီးကာ မှဒီလောက်သိသိသာသာကြီး ဖင်ကိုအဆောင့်ခံလိုက်ရတာကို ရိပ်မိလောက်တယ်လို့လဲ ပြန်တွေးမိကာ ထူပူလာပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲသိတယ်..ပုဆိုးထဲကလီးက တော်ရုံတန်ရုံတင်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အရသာထူးတွေတွေ့နေတာမို့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထဲကနေ ထိုးထွက်တော့မလောက်ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီလောက်တောင့်တင်းနေတဲ့ လီးနဲ့ ဖင်ကိုအထိုးခံနေရတာတောင် တချက်မှပုံစံ မပျက်ပဲ နေနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးကိုလဲ အံ့သြလာပါတယ်။ “ ဖင်ကြီးက အတုကြီးများလား မသိဘူး ” အဲဒီလိုတွေးမိတာနဲ့အတူမျက်စိကပါ ဒေါ်မမလေးရဲ့ဖင်ကြီးကို ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဟောဗျာ… ကျောင်းစိမ်းထမီ ဖင်အောက်ဘက် လောက်မှာ ကျပ်စေ့လောက်ရှိတဲ့ ရေစိုကွက်လေးပါလား။သိလိုက်ပါပြီ..မောင်နိုင်လဲ အဲဒီလောက်မညံ့ပါဘူးလေ။ဒီအခြေဒီအနေ မှာ ဒီအကွက်က ဘယ်ကအရည်စိုတာလဲဆိုတာ တန်းသိလိုက်ပါပြီ။ဘယ့်နှယ့် နောက်ကနေတရစပ်လီးနဲ့ထိုးနေတာကို ငြိမ်လှချည် လားလို့ ထင်နေတာ။လတ်စသတ်တော့ ဒေါ်မမလေးတယောက် စောက်ပတ်ထဲက အရည်ကျလောက်အောင် ဖီလင်ယူနေတာကိုး။နို့မို့ဆို လဲ ဒီထမီပေါ်မှာ စောက်ရည်တွေစိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ဟာဟူဖင်ကြားထဲကနေစီးသွားမှာပါ။အခုဟာက ကျွန်တော်ကလီးနဲ့ပြေးပြေးဆောင့် နေတော့ ထမီစကပါ ဖင်ကြားထဲရောက်ရောက်သွားပြီး စောက်ရည်ကြည်တွေက ထမီပေါ်မှာပါလာစိုနေတော့တာပေါ့။မှတ်တိုင်မှာကားရပ်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးလွယ်အိတ်ကို ရှေ့ကိုပြောင်းလွယ်လိုက်ရတာပဲ။နို့မို့ဆို လမ်းလျှောက်ရင်ပေါင်ကြားက ကောင်က ငေါထွက်နေမှာလေ။ကားလမ်းကိုခပ်သွက်သွက်ကူးလိုက်ပြီး ဒေါ်မမလေးနဲ့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရအောင် ရှေ့ကနေလမ်းထဲကိုအရင်ဝင်လာခဲ့ လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ထုံးစံအတိုင်း ရုံးဆင်းကျောင်းဆင်းချိန်မို့ ဒေါ်မမလေးတို့လမ်းထဲမှာ စည်ကားနေပါပြီ။ရှေ့ကနေ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ လျှောက်လာပြီးမှ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ထမီပေါ်ကအစိုကွက်ကို သတိရလိုက်ပါတယ်။သူ့ဟာသူတောင်ဖင်မှာကွက်နေတာသိပါ့မလားလို့။ဒီအတိုင်း ဖင်မှာအကွက်ကြီးနဲ့ တလမ်းလုံးလျှောက်လာရင် မြင်တဲ့လူတွေအကုန်ဟားကြမှာ။ “ ဟာ…ငါပြောလိုက်ရင်လဲ ကားပေါ်မှာဖြစ်ကြတာတွေ အတွက်ရှက်နေရမှာ။ မပြောပဲနေလိုက်တာကောင်းမလား။ ” ဘာလုပ်ရကောင်းမလဲ တွေးပြီးမှ နောက်ဆုံးပြောလိုက်လို့ ရှက်ရတာက ငါ့ကိုပဲရှက်ရမှာ၊ မပြောပဲထားလိုက်ရင် လမ်းထဲကလူတွေအကုန်ကို ရှက်ရမှာ ဆိုပြီး ရှေ့ကနေခဏရပ်စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းကြီးငုံ့ပြီး လျှောက်လာနေတဲ့ ဒေါ်မမလေး ကိုသေသေချာချာပဲရပ်ပြီးကြည့်နေ လိုက်ပါတယ်။အသားအရည်ကတော့ ပုံမှန်ခပ်လတ်လတ်အသားအရည်ပါပဲ၊ ချောသလားဆိုတော့လဲ အဲလိုချောတာမျိုးမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တင်းဖွံ့ထွားတာလေးပဲ ထူးခြားတာပါ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်လောလောဆယ်မှာ ဒေါ်မမလေးကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ မျက်စိထဲမှာကြည့်လို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။ “ ဆ ဆရာ.မ ။ ” “ ဟို ဟိုလေ။ ” ဘေးနားက လိုက်လျှောက်ပြီး ခပ်တိုးတိုးလေးပြောမလို့ ပြင်ကာမှ ဒေါ်မမလေးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်အကြည့်မှာ ရင်တွေတုန်ပြီး ဘာပြော ရမှန်းမသိဖြစ်ကာ ရုတ်တရက် ဆွံ့အသွားရပြန်ပါတယ်။ “ ဟဲ့…ကောင်လေး ပြောလေ ဘာတုန်း။ ” “ အဲ..ဟိုလေ..ဆရာမ..၊ …ဆရာမ ဖင်…အာ..ဟိုဟို နောက်မှာကွက်နေတယ်။အဲဒါ…. ” ပြောပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်နောက်လှည့်မကြည့်တော့ပဲ သုတ်ခြေတင်တော့တာပဲ။ဒေါ်မမလေးတို့တိုက်ခန်းအောက်ကို ရောက်တော့ တခြား ကျူရှင်တူတူတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လှေကားအုတ်ခုံမှာထိုင်ပြီး အာလူးဖုတ်တဲ့လူဖုတ်၊မုန့်စားတဲ့လူကစားနေကြပြီ။ကျွန်တော်က စာအုပ်ထုပ်ကြီးဆွဲပြီးရောက်လာတာမြင်တော့ ဝိုင်းအာကြတယ်။ “ ဟေ့ကောင်…မောင်နိုင်သိပ်မဖားနဲ့ကွာ။
အဆင့်တစ်လဲမင်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ” “ အေးလေ…မောင်နိုင်တို့က သိပ်သိသာနေပြီ။ဆရာမဆီက ဘာစားချင်လို့လဲဟေ့။ ” “ ငဖားကြီးဟေ့ ဟားဟား ။ ”ဝိုင်းဟားနေကြတဲ့ အကောင်တွေ ကောင်မတွေကို မျက်လုံးပြူး လျှာထုတ်ပြပြီး ပြန်နောက်လိုက်ပါတယ်။လက်ထဲကစာအုပ်ထုပ်ကြီးကို အုတ် ခုံပေါ်ဘုန်းကနဲပစ်ချလိုက်ပြီး “ ဟေ့ကောင်တွေ…တံခါးဖွင့်ထားပြီးပြီလား။ ” “ အေးအေး .. ဖွင့်ထားပြီးပြီ။ ” “ပြီးရော ငါဒီအထုပ်ကြီးသွားထားလိုက်ဦးမယ်။ ” ကျူရှင်ရှိတဲ့ နေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ထဲက တယောက်ယောက်ကို ဒေါ်မမလေးက အိမ်သော့ပေးလိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန် တော်တို့ကကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းထိုးတာနဲ့ တခါတည်းထွက်လာလို့ရကြတာလေ။ဆရာမ ကတော့ ကျောင်းကိစ္စတွေဘာတွေရှိတတ် တာမို့ နောက်ကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရင်သွားနှင့်ပြီး လွယ်အိတ်တွေဘာတွေထား အဆာပြေမုန့်တွေဘာတွေစားထားရတာပေါ့။ ဆရာမကကိုယ်ခွဲမရှိဘူးလေ။ဆရာမယောက်ျားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလဲ ချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာပဲမြင်ဘူးပါတယ်။ရှမ်းပြည်ဘက်မှာတာဝန် ကျနေတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ။ယူနီဖောင်းပေါ်က အပွင့်တွေအခက်တွေတော့ပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးလား ဗိုလ်မှူးလားတော့ မခွဲတတ်ဘူး။ ရုပ်ကတော့ အညာသားရုပ်ပဲ။ ကျွန်တော်စာအုပ်ထုပ်ကြီးကိုဧည့်ခန်းထဲမှာထားလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခန်းဆိုတော့ အိမ်သာရေချိုးခန်း ကတွဲလျက်လေ။ခုတော့ဒေါသတွေပြေပြီး ခပ်ပျော့ပျော့လေးဖြစ်နေတဲ့ကောင်က ဆီးသွားလိုက်တော့ပိုပြီးတောင်ပျော့ကျသွားသလိုပါပဲ။ ကိစ္စပြီးလို့ ရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖွင့်မယ်အလုပ်မှာအဝတ်လှမ်းတဲ့ကြိုးတန်းဆီကို မျက်စိကဘာရယ်မဟုတ်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။အတွင်း ပစ္စည်းတွေလှမ်းထားတာပါလား။စကဒ်လိုဟာမျိုးတထည်နဲ့ ပန်တီအပြာလေးတထည်ပါ။လျှော်ပြီးလှမ်းထားတာနဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်က အပြာရောင်ပန်တီလေးကို အလိုလိုလှမ်းယူလိုက်မိပါတယ်။လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအပြာရောင်လေးကို တယုတယကိုင်တွယ်နေရင်းက ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရတော့ပါဘူး။စောစောကညှိုးငယ် နေတဲ့ သကောင့်သားကလဲ အားမာန်အပြည့်နဲ့ချက်ချင်းရုန်းကြွလာပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပုဆိုးကိုကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ကြိုးတန်းမှာတင်လိုက်ပါတယ်။လက်ကိုတံတွေးနဲနဲဆွတ်ပြီး တောင့်တင်းနေတဲ့ လီးကိုရှေ့နောက်ဆွဲ ပြီးဂွင်းထုဖို့ အစပျိုးလိုက်ပါတယ်။တလမ်းလုံးဆောင့်လာရတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ဖင်ကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း အဲဒီဖင်ကြီးမှာဝတ်တဲ့ဘောင်း ဘီကို သေသေချာချာဖြန့်လိုက်ကာ ခွကြားနေရာကို ခပ်ဖွဖွနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ “ ဒီနေရာလေးက စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ အမြဲကပ်နေမယ့်နေရာပဲ။ ” ဆပ်ပြာရနံ့သင်းနေတဲ့ ပန်တီခွကြားနေရာကို လျှာနဲ့မထိတထိ လျက်လိုက်တယ်။စိတ်အာရုံထဲမှာတော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို လျက်ပေးလိုက်ရသလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။
အောက်မှာလဲ လက်က အဆက်မပြတ် ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဂွင်းတိုက်ပေးနေတာမို့ လီးတံထိပ် ကဒစ်ကြီးကလဲ ဖူးကားရောင်ရမ်းလို့နေပါပြီ။တသက်လုံးဂွင်းထုခဲ့သမျှ ဒီတခါထုရတာ အရသာအရှိဆုံးပါပဲ။ရေချိုးခန်းနံရံကို မှီကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အတွင်းခံပန်တီကို မျက်နှာကမခွာပဲ စိတ်ကူးယဉ်ချင်တိုင်းယဉ်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိထုနေရတာလေ။ “ အ…အ…ရှီး။ ” “ ဟင်း….အ…အား။ ” “ကျွိ…..ကျွီ…..ကျွီ။ ” အသံတခုနဲ့အတူ ညာဘက်က ရေချိုးခန်းတံခါးက ပွင့်သွားကာ တယောက်ယောက်ဝင်လာလိုက်တာကို မျက်စိထောင့်မှာရိပ်ကနဲတွေ့ လိုက်ရချိန်မှာ အရာအားလုံးနောက်ကျသွားပါပြီ။တံခါးကို သေသေချာချာပိတ်ခဲ့မိရဲ့လား ၊ စေ့ရုံသာစေ့ထားခဲ့မိသလားဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး။အင်းလေ ဒီလိုလုပ်မိလိမ့်မယ်လို့လဲ ကိုယ်တိုင်တွေးမိခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။ခြေအနေက ပံ့ပိုးလို့ အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါ။ဒေါ်မမလေး အ်ိမ်ထဲရောက်လာတဲ့ အသံကိုလုံးဝကို မကြားခဲ့ပါဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုက်ပွဲ ကပြင်းထန်နေတာကိုး။အခုတော့အောက် ပိုင်းဗလာကျင်းလျက် သူ့ရဲ့ အတွင်းခံပန်တီလေးကို မျက်နှာမှာအပ်ကာ ဂွင်းထုနေတဲ့ မောင်နိုင်ရဲ့ အဖြစ်ကို ဒေါ်မမလေး တစ်ယောက် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံလိုက်ရပါပြီ။ “ မောင်နိုင်…မင်း ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ ” “ အဲဒါ…ဆရာမဘောင်းဘီမဟုတ်လား။ ” “ အခု ပုဆိုးမြန်မြန်ပြန်ဝတ်စမ်း…အောက်ကဟာကိုလဲကြည့်ဦး။ ” ဒေါ်မမလေးကသာ ဇယ်ဆက်သလို ပြောနေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ တခွန်းမှပြန်မပြောတော့ပါ။ဒီလိုထိတောင် ဖြစ်လာမှ ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ပဲ ခံယူလိုက်ပြီလေ။ရှေ့ဆက်တိုးရုံပဲရှိတော့တာပေါ့။ကျွန်တော့်ပေါင်ခွကြားကထုလက်စမို့ တောင် မတ်နေတဲ့ လီးကိုကြည့်ကာ ပုဆိုးပြန်ဝတ်ခိုင်းနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်လုံးကို ဖျက်ခနဲဆွဲကာ ကျွန်တော့်လီးတံ ပေါ်မှာဖိကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်မို့ဒေါ်မမလေးတယောက်ဘာမှမတုန့်ပြန်နိုင်ခင်မှာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကိုပိုပြီးနီးကပ်သွား အောင်တိုးလိုက်တော့ ဒေါ်မမလေးကို ရေချိုးခန်းထောင့်မှာပိတ်ထားလိုက်သလိုပါဖြစ်သွားပါတယ်။လောလောလတ်လတ် စိတ်တွေထကြွထားကြတဲ့ သူနှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှူသံတွေက ရေချိုးခန်းထဲမှာ ပြင်းထန်ဆူညံလာပါတယ်။ “ ဆရာမ…ကျွန်တော်..ကျွန်တော် မရတော့ဘူးဗျာ။ ” “ကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်။လီးတချောင်းလုံး အရမ်းတောင်နေပြီ။ဆရာမဖင်ကို တလမ်းလုံးဆောင့်လာခဲ့တာလေ အခု မနေနိုင်တော့ဘူး။အရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ။ ” “ မောင်နိုင် ..မင်း မင်း ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပါဆိုနေတာကို…ဒီကလေးနဲ့တော့ ခက်ကုန်ပါပြီ။ ” ဒေါ်မမလေးတုန်ယင်စွာနဲ့ မောင်နိုင့် ကိုပုဆိုးပြန်ဝတ်ဖို့ပဲ ပြောနေပေမယ့် လက်နှစ်ဘက်ကတော့ မောင်နိုင်ရဲ့လီးတံကို တင်းကျပ် စွာဆုပ်ညစ်ထားပါတယ်။ဒေါ်မမလေးကဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်ထားချိန်မှာမောင်နိုင်ရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းက အလိုလိုကော့လိုက်ကုန်းလိုက် လုပ်ပေးနေမိတာမို့ ဂွင်းထုပေးတာခံနေရသလိုပါပဲ။်စိတ်ရှိလက်ရှိဖြစ်ညှစ်ထားတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့လက်ထဲကို လီးတံတချောင်းလုံး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေရင်း စိတ်တွေတအားပါလာကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်ကြီးကို ဆွဲဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်နှစ်ဘက်က လီးတံကို ဆုပ်ကိုင်ထားချိန်မှာ ကျွန်တော်ကသိုင်းဖက်လိုက်တာမို့ လက်တွေကို ရုန်းမရအောင်ချုပ်ပြီးသား ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။
နူးညံ့တဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ အတွေ့အထိ နဲ့ ကိုယ်ရနံ့ ကို တခါမှ ဒီလောက်ရင်းရင်းနှီးနှီး မကြုံခဲ့ဖူးတာကလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရမ္မက်ရှိန်ကို တရိပ်ရိပ်တိုးစေပါတယ်။ကျွန်တော့် အထင်တော့ ကျွန်တော်ရော ဒေါ်မမလေးပါ နှစ်ယောက်လုံး နတ်ပူးသလို တုန်ခါနေကြတယ်လို့ ခံစားနေရပါတယ်။ “ မလုပ် ပါနဲ့ကွာ …မဖြစ်ပါဘူး။ ” “ မောင်နိုင်…လွှတ်ပါ ဆရာမကို။ဟိုမှာ…တခြားကလေးတွေ တက်လာတော့မယ်လေ။ ” ပါးစပ်ကသာ လွှတ်ပါတကဲကဲ လုပ်နေပြီး လက်တွေက လီးတံကိုမလွှတ်တမ်းကိုင်ထားတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လည်ပင်း တဝိုက်ကိုခပ်ဖွဖွလိုက်နမ်းနေတုန်းမှာ ဒေါ်မမလေးကစိုးရိမ်စွာပြောလာပါတယ်။ဒေါ်မမလေးရဲ့ကျောပြင်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကအောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း လျော့ချလာပါတယ်။ခါးအထက်ပိုင်းလောက်ဆီကို အရောက်မှာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ မျက်နှာကို တချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ခါးအောက်ကနေမို့မောက်ကားထွက်နေတဲ့ ဖင်သားတွေကိုဆတ်ခနဲဆွဲကိုင်ကာဆီးခုံ ချင်းပူးကပ်သွားအောင်ဆွဲယူလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒေါ်မမလေးက လီးတံကိုဆုပ်ကိုင်ထားဆဲမို့ ဆီးခုံချင်း မပူးကပ်တော့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒစ်ဖျားကသာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ဆီးစပ်ကိုထိုးမိသွားပါတယ်။အရေပြားချင်းပွတ်တာဆို ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်အခုဟာက ဒေါ်မမလေးရဲ့ ထမီစကို ဖိပွတ်မိသွားတာလေ။ကားပေါ်မှာတုန်းကတော့ ကိုယ်ကလဲ ပုဆိုးနဲ့ အောက်ကလဲဘောင်းဘီပါသေး တာဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အခုက ကိုယ်ကအလွတ်ကြီးဆိုတော့ ပူကနဲဖြစ်ပြီး ဒစ်ဖျားတခုလုံးကျိန်းစပ်သွားတာပဲ။ “ အ..အ…။ ” “ ဟင်…ဘာ. ဘာ ဖြစ်လို့လဲ …။ ” “ အား…ကျွတ်..ကျွတ်…ထမီကို ပွတ်ဆွဲသလိုဖြစ်သွားတာ..ကျင်သွားလို့။ ” နေရင်းထိုင်ရင်း ကျွန်တော်ထအော်လိုက်တာမို့ ဒေါ်မမလေးတောင်လန့်သွားတယ်ထင်တယ်။တချိန်လုံးလီးကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို အလန့်တကြားလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အကြောတွေထောင်နေအောင် တင်းမာနေတဲ့ လီးထိပ်ကကျိန်းစပ်နေတဲ့ ဒစ်ဖျားကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ကိုင်ကြည့်ပြိး ဆုပ်လိုက်ဖြေလိုက်လုပ်ပေးနေတုန်း ဒေါ်မမလေးရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အပြုအမူ ကို ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဟင်း ဘာအခုမှတော်တော်နာနေတာလဲ…ဒီလောက်သောင်းကျန်းနေတာကို နဲတောင်နဲသေးတယ်။ ” “ ပျစ် ။ ” ပြောရင်းနဲ့ သူ့လက်ဝါးကို ပါးစပ်နားတေ့ကာ လက်ထဲကိုတံတွေးနဲနဲ ထွေးလိုက်ပြီး၊ အဲဒီတံတွေးတွေကို ကျွန်တော့် လီးတံမှာ သုတ်ကာဖြေးဖြေးချင်းလီးကိုဆွဲကစားပေးပါတယ်။နာနေတာတောင်ပြန်မေ့သွားပြိး လီးကို အလိုက်သင့် ကော့ပေးထားမိပါတယ်။လီးတချောင်းလုံးနီရဲ လာအောင် အရသာတွေ့နေချိန်မှာ အခုလိုဂွင်းထုပေးနေတဲ့ ဒေါ်မမလေး ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာလဲ အရည်တွေဘယ်လောက်ရွဲနေမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်။ “ နာသေးလား…အခု ။ ” “ အ..အ ..အား မနာတော့ဘူး…အရမ်းကောင်းတာပဲ ဆရာမရယ်။ ” “ ပြစ်..ပြစ် ..ဗျစ် ။” “နှာဗူးလေး…မြန်မြန်ပြီးတော့ ….အောက်ကနေတက်လာကျတော့မယ်။ ” “အ..အား ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ…သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးပါ ဆရာမရယ်။ ” “အင်း..လာ ဒီလိုနေ။ ” မျက်နှာချင်းဆိုင် ထုပေးနေတာမို့ ပုံစံမကျတဲ့ အနေအထားကို ဒေါ်မမလေးကပြောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော့်ကိုဆွဲလှည့်ပြီး သူ့ရင်ဘတ်ထဲထည့်ကာ နောက်ကနေလှမ်းပြီးထုပေးတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့လက်တွေကခုနကထက်ပိုပြီးသွက်သွက် လက်လက်လှုပ်ရှားလို့ရသွားတယ်။အားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဘက်ကိုလဲ ဒေါ်မမလေးရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ပြန် ကိုင်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိကိုင်တွယ်နေလိုက်ပါတယ်။
တရစပ် ဂွင်းထုပေးရင်းက ကျွန်တော့်နားရွက်နား ကပ်ကာတိုးတိုးလေးပြော လိုက်တဲ့စကားသံကို အကြားမှာ တကိုယ်လုံးကြက်သီးတွေတောင်ထသွားတယ်။ “ မင်း…ဆရာမကို သိပ်လိုးချင်နေလားဟင်။ ” “ အ..အ..ဗျာ။ ” “ကျူရှင်ပြီးရင် မပြန်နဲ့နော်။…ဆရာမနဲ့မင်းနဲ့ လိုးကြရအောင်ကွာ။ ” “အား….အီး…အ….ပြီးတော့မယ်…ဆရာမ….အ အ ထုပေး ထုပေးပါ။ ” “အင်း…အ..။ ” “ ပျစ် ပျစ် ။” ဒေါ်မမလေးက ဂွင်းထုပေးရင်းပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့်စိတ်ခံစားမှုတွေကပိုပြီးမြန်ဆန်လာပါတယ်။ကျွန်တော် ခါးကို ကော့နိုင်သလောက်ကော့ပေးထားသလို ဒေါ်မမလေးကလဲ လီးတံကြီးကို အားထည့်ပြီးညစ်ကာ ဆက်တိုက်ထုပေးနေတယ်။ အသက်ကိုအောင့်ထားကာလီးတံထိပ် ဒစ်ဖျားကနေ တကိုယ်လုံးကျင်နေအောင်တလိပ်လိပ်တက်လာတဲ့ ကာမအရသာကို အားပါး တရခံစားရင်း သုတ်ရည်တွေကို ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။တကိုယ်လုံးနုံးချည့်ကာ ယိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထူမတ်ပေးရင်း ဒေါ်မမလေးကပြုံးစိစိကြီးလုပ်ကာ “ဟင်း…မြန်လိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်လေး။ ” “ကိုယ့် ဟာတွေကိုယ် ရေလောင်းပြီးဆေးခဲ့ဦးနော်…ဟင်းဟင်း။ ” ပြောပြီးတော့ သူ့လက်တွေကိုရေဆေးကာထွက်သွားတဲ့ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုကြည့်ကာသက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်။ဒီအချိန် လေး ၁၀ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူးလေ။တန်းပေါ်က ပုဆိုးကို ပြန်ယူကာဝတ်လိုက်ပြီး စောစောက ပန်းထုတ်ထားတဲ့ ဒေါသတွေကို ရေဆေးချပြီးမှ ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အမိုးကိုင်းကိုဆွဲပြီး ကျန်တဲ့တဘက်က စာအုပ်ထုပ်ကြီးကို ဆွဲထားလျက်ပါလာပါတယ်။အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဟိုကောင်တွေအသင့်ပြင်ထားပြီးကြတဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဝင်ထိုင်ပြီးအရှိန်မသေ သေးတဲ့ အရသာကို မျက်လုံးမှိတ်ကာ ဇိမ်ယူနေလိုက်တယ်။ဒေါ်မမလေးကတော့ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီး အဝတ်အစားလဲနေတယ် ထင်ပါ တယ်။
ကျူရှင်ပြီးရင် ဆိုတဲ့ အတွေးကဝင်လာပြန်တော့ ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာပါတယ်။ဘယ်လိုစပြီး ဘာတွေလုပ်ရ မလဲဆိုတာတွေးကြည့်နေတုန်း အောက်ကကောင်တွေ ဆူဆူညံညံနဲ့ဝင်လာကြပါတယ်။ “ အေး..ငါ့အိမ်ကပိုက်ဆံမပေးသေးဘူးကွ။ရရင်တော့ ငါလဲဝယ်မှာ။ ” “မဟုတ်ဘူးလေဟယ်..ဟိုကြေငြာမှာဝတ်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုပြောတာ ငါက။ ” “အေးဟေ့ကောင်..မင်းအဲဒီသီချင်း ကော့ဒ်ရှိရင် ငါ့ကိုပေးဦး။” တယောက်တပေါက်နဲ့ ဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိအောင်ဆူညံစွာရောက်လာကြပြီး အလျိုလျိုထမင်းစားပွဲဝိုင်း ၂ ဝိုင်း မှာ နေရာယူနေကြချိန်မှာ ဒေါ်မမလေးလဲ အခန်းထဲကထွက်လာပါတယ်။တီရှပ်ပွပွနဲ့ ကရင်ထမီလိုလို ရှမ်းထမီလိုလို တိုင်း ရင်းသားအဆင် ထမီတထည်ကိုတွဲပြီးသာမန်သာဝတ်ထားပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော်တော်ကြီးကိုလှနေပါတယ်။ “ကဲကဲ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စရအောင်။ ” “သချာင်္ ( ၁ ) သင်မယ်ဒီနေ့။ ” စာအုပ်ထုတ်ဆိုလို့သာထုတ်ထားရတယ် စာထဲမှာကျွန်တော့်အာရုံတွေလုံးဝရှိမနေပါဘူး။ရှင်းပြနေတဲ့အသံတွေ ပြန်မေးနေတဲ့ အသံတွေကလဲ ကြားတချက် မကြားတချက်ပါပဲ။ချထားတဲ့ စာအုပ်ကိုငုံ့ကြည့်နေရင်း ဒေါ်မမလေးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေမိပါတော့တယ်။ငါ လူပျိုရည်ပျက်တော့မှာပါလား ဆိုတဲ့အသိကလဲရှက်သလိုလို ပီတိဖြစ်နေ သလိုလို ခံစားရစေပါတယ်။အင်းလေ…ကြေးစားမိန်းမတယောက်နဲ့ ကာမဆက်ဆံပြီးလူပျိုရည်ပျက်ရတာထက်စာရင်အခုလိုကိုယ် တကယ် တပ်မက်စွဲလမ်းရတဲ့ မိန်းမတယောက်ဆီမှာ လူပျိုရည်အပျက်ခံလိုက်ရတာကို ကျေနပ်မိတာအမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်ကျရင်စိတ်ကူးထဲမှာ အခါအခါမြင်ယောင်မှန်းဆခဲ့ရဖူးတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကို မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း မြင်ခွင့်ရပြီလေ။ကျွန်တော့်ရဲ့ လူပျိုရည်ကိုသောက်သုံးမယ့် ဒေါ်မမလေးရဲ့ ပေါင်ကြားကအချစ်ပန်းပွင့်ကြီးကရော ဘယ်လိုပုံများရှိနေမလဲ။
မဆုံးနိုင်တဲ့အတွေးတွေ အမျိုးမျိုးတွေးနေတာဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲမသိဘူး။ဘေးကကောင်တွေ စာအုပ်တွေသိမ်းဆည်းနေမှ စာသင်လို့ပြီးသွားတာ သိပါတယ်။ထရမလို ထိုင်ပဲထိုင်နေရမလိုဖြစ်နေတယ်။အရေးထဲမှ ဘာမှမသိတဲ့ ဟိုအကောင်တွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ဖို့ခေါ်နေသေးတယ်။ခါတိုင်းလဲ ကျူရှင်ပြီးရင် ထိုင်နေကြပါ။ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ ခေါ်တဲ့အကောင် တွေကို တော်တော်သောက်မြင်ကပ်သွားတယ်။ “ ဟေ့ကောင် လဒ… ထိုင်မှာလားလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်။ ” “ ဟေ..အေးအေး ငါဒီနေ့ မထိုင်တော့ဘူးကွာ အိမ်ကစောစောပြန်လာဖို့မှာထားတယ်ကွ။ ” “ အံမယ်..မောင်နိုင်…ဒီနေ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင်မထိုင်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်လား။ ” “ ဗျာ…ဟုတ် ဟုတ်တယ်ဆရာမ..ဟိုအိမ်မှာကိစ္စလေးရှိလို့ပါ။ ” “ အေးအေး ..လိမ္မာတယ် အိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြန်နော်။ ” “ ဟုတ်ကဲ့..ပြန်မှာပါ။ ” ဟိုကောင်တွေခေါ်နေတာကို အတင်းငြင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးကလဲ ဝင်ပြီးစနေပြန်ပါတယ်။အိမ်ကို တန်းတန်း မတ်မတ်ပြန်နော်တဲ့..ဟားဟား။အားလုံးလွယ်အိတ်ကိုယ်စီဆွဲကာ ထွက်နေကြပါပြီ။ကျွန်တော်ပဲ ယောင်လည်လည်လုပ်ပြီး ဟိုဟာပျောက်သလိုလို..ဒီဟာပျောက်သလိုလိုနဲ့ ထိုင်ရာက မထသေးတာ။အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်မမလေးကလဲပြုံးစိစိနဲ့တချက် ကြည့်ပြီး မီးဖိုခန်းဘက်ကို ထသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ ချက်ချင်းအကြံရပြီးနောက်က ထလိုက်သွားတယ်။ “ အေးအေး ဟေ့ကောင်တွေသွားနှင့်ကြကွာ…ငါရေသောက်ပြီးမှလိုက်လာခဲ့မယ်။ ” ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ တမင်အားလုံးကြားအောင်အော်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။အထဲရောက် တော့ ဒေါ်မမလေးကလဲ သောက်ရေအိုးနားမှာရပ်စောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုမှန်းမသိတဲ့အပြုံးနဲ့ ပြုံးပြီးကြည့် နေပြန်ပါတယ်။ “ ကိုယ်တော်လေး..အိမ်ရောက်အောင်ပြန်နော်..ဟုတ်ပြီလား။ ခစ်..ခစ် ။ ” “ အာ…မဟုတ်ပါဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ” “ ဟွန်း…သိပါ့ သိပါ့။ ပြာယာကိုခတ်နေတာပဲ..တခါထဲ။ ” “ အခုပြန်မဆင်းလို့မှ မရတာ..ဆရာမရဲ့ ။သူတို့သိကုန်မှာပေါ့။ ” “ အေးပါ…သွားလိုက်ဆင်းသွားလိုက်။ပြီးရင်.. ဟိုဘက်လမ်းဘက်ကနေပြန်ပတ်ပြီးတက်လာခဲ့…ဟုတ်ပလား။ ” “ အာ..အင်းအင်း။ ” “ ဟေ့ သိပ်လဲ အမြန်ကြီးတက်မလာနဲ့နော်…ကျွန်မရေလေးဘာလေးချိုးပါရစေဦး။သွားသွား..။ ” အင်း ဟုတ်သားပဲ။အခုခပ်တည်တည်နဲ့လိုက်ဆင်းသွားပြီးမှ ဟိုဘက်လမ်းကနေပြန်ပတ်လာခဲ့လို့ ရတာပဲ။မိန်းမဥာဏ် ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာနေမှာ။
ကျွန်တော်ကတော့ မွှန်နေတာနဲ့ ဘာမှမတွေးတတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ဒေါ်မမလေးကရေတောင် ချိုးထားဦးမယ်ဆိုပါလား။ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ ရောပြီးအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။လမ်းထိပ်ကို ရောက်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ စနစ်တကျနေရာယူပြီးထိုင်နေကြတဲ့ ကောင်တွေကလှမ်းခေါ်ကြပြန် ပါတယ်။စနစ်တကျနေရာယူတယ်ဆိုတာက ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်သွားသမျှ စော်တွေကို မျက်စိတဆုံးလဲ ကြည့်နိုင်ရမယ်၊ အချင်း ချင်းလဲ မြင်ကွင်းကို ပိတ်တာကွယ်တာမျိုးလဲ မရှိရအောင် ထိုင်ကြတာကိုပြောတာပါ။အင်း အချိန်နဲနဲဖြုန်းရမယ်ဆိုတော့လဲ ခဏလောက်ဝင်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ထဲဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ “ အေးလာလာ မောင်နိုင်…မင်းထိုင်ဦးမလို့လား ပြန်မယ်ဆို။ ” “ ဆေးလိပ်လေး သောက်လိုက်ဦးမယ်ကွာ..အိမ်ရောက်ရင်သောက်လို့မရတော့ဘူးကွ။ ” ပြောရင်းနဲ့ ခွေးခြေပုတလုံးယူကာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်က လန်ဒန် တလိပ်ကိုမီးညှိကာဖွာနေလိုက်သည်။မီးခိုးငွေ့များ ကိုအရှိုက်ထဲရောက်အောင် ရှူသွင်းပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်မှုတ်ထုတ်ကာ စီးကရက်ကို အရသာခံသောက်နေတုန်းမှာ.. “ မောင်နိုင်…နေ့ခင်းက မင်းတို့ဆီကအောစာအုပ် မိလို့ဆို..။ ” “ ဟာ..မင်း ကိုဘယ်သူပြောလဲ.။ ” “ ဟိုကောင် ကုလားပြောတာလေ…မလေးရှားကိုယ်တိုင်မိတာဆို ။ ” “ မဟုတ်ပါဘူးကွာ…အဲဒီကောင်ကုလားလျှောက်ဖွနေတာ..မလေးရှားမိတာဆို ငါဘယ်လိုကျူရှင်လာရဲမလဲကွ။ ” “ အေးပေါ့ ဟေ့ကောင် အသစ်လေးဘာလေးရရင်လဲ ပေးဖတ်ဦးကွာ။ ” “ ရရင် ပေးပါမယ်ကွာ မပူပါနဲ့။ ” သောက်ကုလား..ပါးစပ်ပေါက်က ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး။
မင်သေသေနဲ့ ပိတ်ငြင်းထားလိုက်ရတယ်။ဒေါ်မမလေးကို နောက်ကွယ်မှာ ကျောင်းသားတွေက မလေးရှားလို့ခေါ်ကြတယ်လေ။မမလေးဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖျက်ခေါ်ကြတာပါ။အခုတော့ အဲဒီမလေးရှား အောစာအုပ်မိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော်တော်ပြန့်နေပြီလားမသိဘူး။ကုလားကို ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ စွတ်ဖွာနေတဲ့ စီးက ရက်က ဖင်စီခံနားထိကုန်နေပြီမို့ လွှင့်ပစ်လိုက်ကာ… “ ကဲ..ငါလိမ့်တော့မယ်ကွာ.အားလုံးပဲ။ ” “ အိုကေ အိုကေ။ ” “ အေးအေး…မနက်ဖြန်ကျ ရှစ်တန်းက ကောင်တွေနဲ့ ကန်ဖို့ချိန်းပြီးပြီနော် ။ ” “ အေးပါ ငါသိပါတယ်။ ဒိုးပြီကွာ။ ” ကားမှတ်တိုင်ရှိရာဘက်ကို ထွက်ခဲ့ပြီး မှတ်တိုင်မှာ အရိပ်အခြေခဏကြည့်လိုက်တယ်။အားလုံးရှင်းနေတော့မှ မှတ်တိုင်ကိုကျော် ပြီး ဟိုဘက်လမ်းထဲကို ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။လမ်းအဆုံးကနေ ဒေါ်မမလေးတို့လမ်းထဲကို ပြန်လျှောက်ဝင်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ လမ်းမီး တိုင်တွေတောင်ထိန်ညီးနေပါပြီ။အာ…ညခုနစ်နာရီခွဲလောက်တောင်ရှိနေပြီပဲ။အချိန်ကို သတိထားမိတော့မှ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ရာ သတိရတယ်။ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်အချိန်မှ ပြီးမယ်ဆိုတာမသိတော့ ဖုန်းဆက်ထားမှပဲဆိုပြီး တွေ့တဲ့စတိုးဆိုင်လေးတခုက နေဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ဆရာမမွေးနေ့ အလှူရှိလို့ ဝိုင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့သေသေချာချာကူညီဖို့တောင် ပြန်မှာနေသေးတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီမို့ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေက ပေါ့ပါးလျင်မြန်စွာနဲ့ ဒေါ်မမလေးရှိရာကို အပြေးတပိုင်း ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လှေကားထစ်တွေကို ကျော်ခွပြီးပြေးတက်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခန်းရှေ့ရောက်တော့ ပိတ်ထားတဲ့တံခါးကို ခေါက်ဖို့ ရင်တွေတုန်နေပါတယ်။မသိမသာ သက်ပြင်းလေးချပြီးမှ သစ်သားတံခါးကို ခပ်အုပ်အုပ်လေးခေါက်လိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကသတိထားမိသွားမှာစိုးလို့ပါ။ “ ဒေါက် ဒေါက် ။ ” “ ဂျောက်…ကျွီ ။ ” ဖြေးဖြေးချင်းပွင့်လာတဲ့ တံခါးကြားကနေမြင်လိုက်ရတဲ့ ဒေါ်မမလေးကို ကျွန်တော်တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့သူလိုငေးမိသွားပါတယ်။ ရေမခြောက်တခြောက်ဆံပင်ရှည်တွေကိုဖြန့်ချထားပြီး သနပ်ခါးကျဲကျဲလေးလိမ်းထားကာ ကပိုကရိုလှနေတဲ့ ဒီလိုပုံမျိုးကို မြင်မှ မမြင်ဘူးခဲ့တာလေ။ပြီးတော့ စပန့်သားလို့ ခေါ်မလားမသိဘူး အဲဒီလိုပျော့ပျော့ပါးပါး ဂါဝန်ရှည်လေးနဲ့ ရှိသမျှ ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေကိုလဲ တမင်ပေါ်အောင်ဖော်ပြီးဝတ်ထားသေးတယ်။သာမန်လောက်ပဲရှိတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့အုံနှစ်လုံးတောင်မှဒီညမှာ တော်တော်ထွားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။အိမ်ထဲမရောက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးက ဆွဲခေါ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့ အိမ်တံခါးကို ဂျက်ပါထိုးပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဘာစလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိလို့ ဆက်တီပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာစွေ့ကနဲဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။တကယ့် တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြတော့ အတွေ့အကြုံကစကားပြောပါပြီ။ပြေးပဲဖက်ရမလား တက်ပဲခွရတော့မလား ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်တတ်တော့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးကအလိုက်သိစွာလမ်းကြောင်းပြပေးနိုင်လုို့သာတော်ပါတော့တယ်။ရှင်အရင်စမှ… ဆိုရင်တော့ ဒီညဒီလိုပဲခုံပေါ်မှာထိုင်နေရတော့မှာ အသေအချာပဲ။ “ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ရရဲ့လား …မောင်နိုင်။ ” “ ဟုတ်..ဟုတ် ရတယ် ဖုန်းဆက်ထားပြီးပြီ။ ” “ ဟုတ်လား…ဒါဆိုအေးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်။ ” ခေါင်းညိတ်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်သားအချင်းချင်းထိကပ်သွားအောင် ဒေါ်မမလေးကတိုးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ လက်တဘက်က ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကျော်ပြီးဖက်ကာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းတခုလုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲချလိုက်တယ်။
အလိုက်သင့်ကျသွားတဲ့ကျွန်တော့်မျက်နှာကတော့ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့အုံသားကိုပါးနဲ့ကပ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။နူးညံ့လွန်းတဲ့အတွေ့အထိ ကြောင့် အောက်မှာဘော်လီတောင်ဝတ်မထားတာကို သိလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပါးနဲ့ အဲဒီရင်သားအိအိကိုလိုက်ပွတ်တော့တာပါပဲ။ ဒေါ်မမလေးကလဲပါးနဲ့ကပ်ပြီးနို့အုံကိုပွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးဖွကစားကာငြိမ်နေပါတယ်။ပါးပြင်ကို တချက်တချက်လာလာထောက်တဲ့ မာတောင်တောင်နို့သီးခေါင်းလေးကိုသွားနဲ့သာသာလေး ဖိကိုက်လိုက်တော့ ဒေါ်မမလေး ဆတ်ခနဲတွန့်သွားကာ “ ဟေ့…မကိုက်နဲ့လေကွာ..ပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ” “ အသည်းယားလို့…ကိုက်လိုက်တာ။ ” “ ဟွန်း အသည်းပဲယားတာလား…။ ” “ ဟင်း ဟင်း ။” “ လာ..ဒီလိုလေးနေကွာ…၊။ ” ဘေးတစောင်းကြီးမှီထားတဲ့ကျွန်တော့်ကိုခဏထခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ဒေါ်မမလေးကအရင်ဆက်တီပေါ်မှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းခုံပေါ်တင်ကာဒူးနှစ်ဘက်ကိုကားကားလေးထောင်ပြီးထိုင်တယ်။ဂါဝန်အောက်နားစက လွတ်သွားတာမို့ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဒူးအထက်နားကလောက်ကနေတင်ပါးရင်းထိဆင်းသွားတဲ့ပေါင်လုံးကြီးတွေကို မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကတုန်ကရင်ကြီးဖြစ်ကာပုဆိုးထဲကပစ္စည်းကလဲ ချက်ချင်းသိသိသာသာ သွေးတွေတိုးလာပါတော့တယ်။ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲပြီး အဲဒီဒူးနှစ်လုံးကြားမှာနောက်ပြန်ဝင်ထိုင်ခိုင်းကာ အနောက်ကနေဖက်ထားပြီးသူ့ရင်ဘတ်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပြန်တယ်။အဲဒီတော့ဘေးကထောင်နေတဲ့ဒူးနှစ် ဘက်ကဂါဝန်စတွေကအလိုလိုလျောဆင်းသွားပြီး ပေါင်ရင်းမှာသွားစုနေပါတယ်။အသားသိပ်မဖြူပေမယ့် ပေါင်သားကြီးနှစ်လုံးကတော့မီးရောင်အောက်မှာဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးကိုပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော့်လက်နှစ် ဘက်ကို ဒူးထိပ်မှာအသာတင်ပြီးမှဒေါ်မမလေးရဲ့ပေါင်သားတုတ်တုတ်တွေကို မရဲတရဲကိုင်တွယ်ကြည့်ပါတယ်။ “ ဟွန်း..ကျောင်းကပြန်လာတုန်းက သူများကို တလမ်းလုံးအနောက်ကလုပ်လာတာ..။
ခုမင်းကို ပြန်လုပ်မယ်…ဟားဟား..။ ” “…..ဟင်း..ဟင်း ။ ” “ ပြစမ်းပါဦး…ဆရာမဖင်ကိုတောင်ထိုးချင်နေတဲ့ဟာလေးကို…။ ” ဒီအဆင့်ထိရောက်နေတာတောင်ကျွန်တော်ပြောမထွက်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုဒေါ်မမလေးကပြောရဲနေတာ အိမ်ထောင်သည်မို့လားတော့မသိဘူး။သူတစ်တစ်ခွခွကြီးတွေပြောလိုက်တိုင်းကြားရတဲ့ကျွန်တောရင်တွေပိုခုန်တာ တော့အမှန်ပဲ။ပြောရင်းကခပ်လျော့လျော့ကျွန်တော့်ခါးပုံစကိုဖြေချလိုက်ကာအတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကရုန်းကြွနေတဲ့ လီးကိုအသာလေးဆွဲထုတ်ပါတယ်။ဘောင်းဘီထဲကထွက်လာရလို့အားရဝမ်းသာတောင်မတ်နေတဲ့လီးတံကို ဖြေးဖြေးချင်း အပေါ်အောက်ကစားပေးပါတော့တယ်။ကျွန်တော့်ဖင်တွေခုံပေါ်ကနေကြွကြွ တက်သွားတဲ့အထိ အရသာတွေ့အောင်စပြီးထုပေးနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ပေါင်တွေကိုပွတ်နေတဲ့လက်တွေကလဲတဖြည်းဖြည်းပေါင်ခွ ကြားဆီရောက်အောင်တိုးနေပါပြီ။ပေါင်ရင်းနားရောက်လာလေလေ အတွေ့အထိကပိုပြီးနူးညံ့လာလေလေပါပဲ။ “ ဟင်း…အင်းး….အ ။ ” “ ပြစ် ပြစ်…ဗျစ် ။ ” “ ကောင်းလားဟင်….ဆရာမထုပေးတာ ။ ” “ အား….ဟ…ကောင်း တာ..ပေါ့…။ ” “ မမ…အဖုတ်ကြီးလဲ ယားနေပါပြီ ကလေးရယ်…။ ” “ ဟင်…မမ..အား…။ ” “ အင်းလေကွာ….လိုးပဲလိုးတော့မယ်…ဆရာမလို့ခေါ်တုန်းလား။ ” “ အင်း…အင်း မမ ။ ” သူ့ကိုယ်သူမမလို့ပြောလာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်ထဲမှာကျွန်တော့်လီးတင်မကဘူးအောက်ကဥတွေပါ အရသာတွေ့နေပါပြီ။ဥတွေကိုခပ်ဖွဖွနယ်ရင်းလီးကိုတံတွေးတွေရွှဲနေအောင်ဆွတ်ကာအထုခံနေရတာရောံဒေါ်မမလေးရဲ့ပေါင်သားတွေကိုပွတ်နေရတာရောတစ်တစ်ခွခွကြီးတွေကြားနေရတာရောကြောင့်ကျွန်တော့်စိတ် တွေအရမ်းကိုပြင်းထန်လာပါတယ်။တဝက်တပျက်ပဲချွတ်ထားတဲ့ပုဆိုးကို ကန်ထုတ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မမလေးကိုမှီထားရာ ကနေထကာအပေါ်ကအကျီ င်္ကိုပါချွတ်ချလိုက်တော့ပါတယ်။လီးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြိး တခစ်ခစ်ရယ်နေတဲ့ ဒေါ်မမလေးကို လက်မောင်းရင်းနှစ်ဘက်ကနေဆွဲမပြီးထခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ “ ဟဲ့ ဟဲ့…ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းကွ. အင့် ။ ” “ဟင်း ဟင်း ။ ” “ ပြွတ်…ပြွတ်..။ ” ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုအမူကို ဒေါ်မမလေးအံ့သြလို့ မဆုံးသေးခင်မှာ သူ့ရဲ့ ပါးနှစ်ဘက်ကိုဆွဲပြီး ထူအမ်းနေ တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို ပြန်လည်သိုင်းဖက်ကာ အလိုက် သင့်နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ပေးလာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဂါဝန်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ အတားအဆီးဖြစ်နေ တာကို စိတ်မရှည်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လိုးရတော့မယ့် ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလဲ အခုထိမမြင်ရ သေးတာ မကျေနပ်ဘူး။ဒေါ်မမလေးကတော့ ကျွန်တော့်လီးကိုပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်နေခဲ့သလောက် ကျွန် တော်ကျတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို မြင်တောင်မမြင်ရသေးဘူးလေ။နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေရင်းက ကျွန်တော့်လက် တွေကို ဒေါ်မမလေးရဲ့တင်ပါးကားကားကြီးနှစ်လုံးကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ရင်း “ ဆရာမ..ဟာ..မမ ။ ” “ ဟင်း…အင်း …ဘာ လဲ ။ ” “ ဂါဝန်ကြီး မချွတ်သေးဘူးလား….ဟင်။ ” “ သြော်…ချွတ်လေ..ကလေးချွတ်ပေး ။ ” “ အင်း။ ” နှစ်ယောက်သားပူးကပ်နေတာကို ခွာလိုက်ပြီးတော့ ဒေါ်မမလေးလက်နှစ်ဘက်ကို မြှောက်ထားပေးပါတယ်။ ဂါဝန်အောက်နားစတွေကိုလိပ်ယူပြီး ဆွဲတင်လာကာ ခေါင်းပေါ်ကနေမပြီးချွတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်တော် ရော ဒေါ်မမလေးပါ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတီးတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်သိပ်မြင်နေချင်တဲ့ စောက်ဖုတ် ကြီးကို သေသေချာချာမတွေ့ရသေးပေမယ့် ဆီးစပ်မှာအုံခဲနေတဲ့ စောက်မွှေးမဲမဲတွေကိုမြင်တာနဲ့တင် လီးတံက တင်းသထက်တင်းလာပါတယ်။ဒေါ်မမလေးက သူ့တကိုယ်လုံးကို အငမ်းမရကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို ပြန်ပြီးဝင်လာကာ အနမ်းတွေပေးပြန်ပါတယ်။ဘာအတားအဆီးမှ မရှိတော့ပဲ အရေပြားချင်းထိကပ်ပွတ်သပ်ရတဲ့ အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းထန်သွားပါပြီ။ “ ဟင်း ဟင်း အား။ ” “ဟ ဟား အင်း ။ ” အဝတ်အစားကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မမလေးကိုဖက်ထားရင်းက ကျွန်တော့်လက်ကိုသူ့ပေါင်ခွကြားထဲကိုထိုးထည့် လိုက်တော့ အသာလေးပေါင်တွေကိုဟပေးပါတယ်။မို့မို့ဖောင်းဖောင်းနဲ့ နူးညံ့လွန်းလှတဲ့ အသားစိုင်တခုကို လက်ထဲ မှာ အပြည့်စမ်းမိပါတယ်။ “ ဟင်း ဟင်း ဒါ မမဟာကြီးလားဟင်။ ” “ အင်း…အ.. ကလေး…သိပ်လိုးချင်နေတဲ့ မမစောက်ပတ်ကြီးလေ။ ” “ အ…အ..အား။ ” “အရည်တွေ ဟ..အ ရွဲနေတာ တွေ့လား။ ” “အင်း အရမ်းကိုင်လို့ကောင်းတာပဲ မမရယ်။ ” “လီးကြီးနဲ့လိုးရင် ပိုတောင်ကောင်းဦးမှာ…ဟ ဟင် ဒီ ဒီလိုလေ…။ ” “အ အ…အား မမ ၊။” ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကာပေါင်ကိုကားလိုက်ပြီး ဒစ်နဲ့ပေါင်ခွကြားကို တရကြမ်းဆွဲတိုက်လိုက်တော့ ကျွန်တော်အသည်း ခိုက်လောက်အောင်ကောင်းသွားပါသည်။
စနက်တံကို မီးရှို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာမို့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ကိုယ်လုံးကို ကြမ်းပြင် ပေါ်ပက်လက်ဆွဲလှဲချလိုက်ကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထဲကို ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အခုမှပဲ အမွှေးအုံကြားထဲက မို့ဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုအသက်ရှူမေ့လောက်အောင် မြင်ရပါတော့တယ်။တကယ်ကိုကြည့်လို့မဝပါဘူး။အရည် ကြည်လေးတွေစီးယိုပေကျံနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ ဖွဖွလေးပွတ်လိုက်လက်ဝါးကြီးနဲ့ အတင်းဆုပ်လိုက် လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်။ “ မမ အဖုတ်ကြီး..အရမ်းလှတာပဲ မမရယ်။ ” “ လှတော့ဘာလုပ်ချင်လဲ…ပြော။ ” “ လ..လိုးချင်တယ် မမ ရယ် ။ ” “အင်း အ လိုးလေကွာ လိုးတော့ မမစောက်ပတ်ကလဲ အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီ။ ” “ဘတ်..ဖတ်။ ” ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုမိုးပေါ်ထောင်ကားလိုက်ကာ စောက်ဖုတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပွတ်ရိုက်ပြပြီး အလိုးခံချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံလုပ်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့ကိုနဲနဲတိုးလိုက်ကာလီးတံကို အချောင်းလိုက်စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ အကွဲကြောင်းအလယ်လောက်မှာလီးကိုတေ့ပြီးဖိထိုးချလိုက်တယ်။တောင့်တင်းနေတဲ့လီးတံက ဒစ်မြုပ်ရုံလောက်ပဲဝင်တယ်။ အပေါက်နဲ့လွဲနေတဲ့လီးကို ဒေါ်မမလေးကကိုင်ပြီးအပေါက်တည့်ပေးတော့မှကျွန်တော်ဖိထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပူနွေးစိုရွဲနေ တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို အိကနဲ တိုးဝင်သွားပါတော့တယ်။ဒစ်ဖျားကနေ အရင်းထိအောင် ပူနွေးတဲ့တွင်းလေးထဲစိမ်လိုက်ရ သလိုလို ဖြစ်သွားချိန်မှာ ရင်ဘတ်ထဲမှာလဲဟာကနဲဖြစ်သွားပါတယ်။ “အား…ဟ…ကလေး..ကလေး..လီးကြီး မမ အဖုတ်ထဲဝင်သွားပြီ။ ” “ ဗြွတ်…ဗြွတ်….စွတ်။ ” “ အ..အ..မမ…ကို ကျွန်တော်လိုး..နေတာလေ…။” “အီး အင်း လိုး လိုး…ဆောင့်ပေး…ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေးပါ….မမ..ယားလွန်းလို့…။ ” “ ပြွတ်…ဒုတ် ဒုတ်…ဖွတ် ။ ” လီးတချောင်းလုံးဝင်နေတာတောင်အောက်ကနေကော့ပြီး ပြန်ပြန်ဆောင့်နေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလှမ်းကိုင် ပြီး ဒူးတွေပွန်းလာတဲ့အထိဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကိုလီးတံဝင်တာထွက်တာကိုပါအရသာခံကြည့် မိပါတယ်။ဂွင်းထုတဲ့အရသာနဲ့ အခုလိုလိုးရတာနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တာပါ။ဒေါ်မမလေးကလဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်း ကုန်ဖြဲကားထားကာကျွန်တော်ဆောင့်သမျှကိုအောက်ကနေအော်ပြီးခံနေပါတယ်။
တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ကာမအရှိန်နဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလဲ ပိုပြီးတော့ မြန်လာပါတယ်။လီးကို ဆွဲမထုတ်ပဲ ဆောင့်ကြောင့်ပြောင်းထိုင်ကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ခါးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်ပြီး အားရပါးရအရှိန်ပါပါဆောင့်တော့လီးကအထဲကိုပိုဝင်သွားတယ်ထင်တယ်ဒေါ်မမလေးမျက်နှာ ပါရှုံ့မယ့်မယ့်ဖြစ်ကာ အော်နေပါတယ်။ “ဒုတ် ဒုတ်.. ဗြစ် ။” “ အမလေး…အား …ကောင်းလိုက်တာ….ဆောင့် ဆောင့် ။ ” “ ဟင်း…ဟား….အင့် ။ ” “ အ လီးကြီးဆုံးအောင်ဆောင့်ပေးနော်….အား ကောင်းလိုက်တာ…။ ” “ဒုတ် ဒုတ် ဖွတ်။” “အား အား ကျွတ်..အား။ ” “ဆောင့် အ..လိုးပါ….လိုးပေးပါ ကလေးရယ် ။ ” “အား အား အမလေး …အိုး….။ ” အော်တာသိပ်အကျယ်ကြိးမဟုတ်ပေမယ့်တဘက်ခန်းတွေ ကြားမှာကိုကျွန်တော်ကစိုးရိမ်နေမိပါသေးတယ်။ဒေါ်မမလေး ကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ကျွန်တော်ဆောင့်ပေးသမျှကို အပြည့်အဝဖီလင်ယူနေပါတယ်။နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလဲသူ့ဘာသာ ပွတ်ကာ ကစားနေတာကလဲကျွန်တော့်ကိုပြီးသွေးကြွအောင်လုပ်ပြနေသလိုပါပဲ။ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုလဲကော့လိုက်ပြန်ချလိုက် နဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာလီးတံကိုရမ်းခါနေအောင်အောက်ကနေကစားပေးပါတယ်။အဲဒီပုံစံနဲ့ ပဲ အားရပါးရဆောင့်လိုး ရင်းလီးထိပ်မှာကျင်ကနဲဖြစ်ကာ တကိုယ်လုံးကြောတွေပြတ်ကျသွားသလိုခံစားလိုက်ရတော့မှ ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှာမသိလောက်အောင်ကျွန်တော်လဲကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သုတ်ရည်တွေကိုဒေါ်မမလေးရဲ့စောက်ဖုတ် ကြီးထဲမှာပဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘယ်လိုမှတောင့်မထားနိုင်တော့ပဲဒေါ်မမလေးရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုမှောက်ချပြီး မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်…… ပြီးပါပြီ။